လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင?? - Yangon Media Group
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင??
ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ရခိုင်ဒေသရှိ ကိစ္စများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ယာယီနေအိမ်အလုံးတစ်ရာကို လှူဒါန်းလွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တရုတ်သံအမတ်နှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြား သဘောတူညီမှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိမ်းရှောင်သွားသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးကို ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဆောင်ရွက်နေရသည့် အခြေအနေနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယာယီနေအိမ်လှူဒါန်းပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့သော လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် ခဏတာတွေ့ဆုံမေးမြန်း ဖြစ်ပုံများကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
မေး- လက်ရှိ လက်ခံရေးစခန်းတွေမှာ ယာယီနေထိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်က ဘယ်လိုတွေ ရှိနေလဲ။ တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းတဲ့ ယာယီ နေအိမ်တွေကိုရော ဘယ်လိုစီမံသွားမလဲ။
ဖြေ- အဲဒီမှာ ဝန်ထမ်းတွေ အများကြီး၊ ရာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေ နေထိုင်ဖို့ ဒီလိုဟာတွေ အများကြီးလိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စိစစ်တာတွေရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ ရှိတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးက စိစစ်တာတွေရှိတယ်။ ရုံးလုပ်ငန်း တွေ ဆောင်ရွက်စရာတွေ ရှိတယ်။ အများကြီး ဆောင်ရွက်စရာတွေ ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ယာယီ နေအိမ်တွေ အများကြီးလိုတယ်ဗျ။ အခု တရုတ်နိုင်ငံက လှူတာကိုတော့ အဲဒီနေရာ တွေအတွက် အရေးပေါ်သုံးမှာ။ ဒီဟာတွေ ကို ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်း တွေကိုပဲ အဓိက ခွဲဝေပေးမှာပါ။ ဒါတွေက ယာယီအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ လက်ရှိ ရခိုင်ဒေသမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကဘာတွေလိုအပ်ချက် တွေရှိလဲ။
ဖြေ- လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးက ကျွန် တော့်ကိုလည်း ဖိတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့ အခါကျ တော့ ဒီမှာလှူဒါန်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့ ယာယီ နေအိမ်တွေက အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တပ်ဆင်ပြီး နေလိုက်ရုံပဲဆိုတဲ့ အိမ်လေးတွေ ပေါ့။ အိမ်အလုံးတစ်ရာပေါ့။ အဲဒီလိုလှူဒါန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် အများကြီး ဝမ်းသာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက လိုအပ်ချက်အမှန်ပေါ့။ လိုအပ်ချက်အမှန်ကို ဖြည့် ဆည်းတာဖြစ်တယ်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ဖြစ်သလို လိုအပ်တိုင်းမှာ အကူအညီပေးတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန် တော်တို့ သဘာဝဘေးတွေဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းနေကျပါ။ ရခိုင်နဲ့ပြောရရင် ရခိုင်ဒေသဟာ ဘေးနှစ်ခုလုံးကို ကျရောက်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်။ သဘာဝဘေးရော၊ လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးရောပေါ့ နော်။ အခုအခါမှာ လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေး ကျရောက်နေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့။ ဘယ်လို လိုအပ်လဲဆိုရင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား ပြီးတဲ့နောက်မှာ အိမ်တွေ၊ အဆောက်အအုံ တွေ မီးရှို့ခံရတာ ရှိတယ်။ မီးလောင်သွားတဲ့ အခါမှာ အဆောက်အအုံတွေ ပြန်လည်တည် ဆောက်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျွန် တော်တို့အစိုးရကနေပြီးတော့ UEHRD စီမံကိန်းပေါ့။ ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းကြီးနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်က သုံးရပ်ရှိတယ်။
လူတိုင်းပြန်လည် လက်ခံရေးနဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေး၊ နံပါတ်နှစ်က ပြန်လည် နေရာချထားရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ နံပါတ်သုံးကတော့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နဲ့ ရေရှည်ပဋိပက္ခ ကင်းဝေးရေးပေါ့။ ဒီသုံးခုစလုံးမှာ တကယ်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကနေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းလို့ရတယ်။ ဒီရည် ရွယ်ချက်သုံးချက်အပေါ်မှာ လိုက်ပြီးတော့ လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ အစိုးရကို ထောက်ပံ့တဲ့ ကိစ္စပေါ့။ နောက်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ အင်န်ဂျီအိုတွေ၊ အိုင်အင်န် ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ နိုင်ငံတွင်းရော၊ ပြည်ပရော အကုန်လုံးကလည်း ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြီး သုံးရပ်အောက် မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ကြီးကိုးခုနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီတော့ လိုအပ်ချက်တိုင်းမှာ ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေရဲ့ အောက်မှာ ဝင်ရောက်ပြီးတော့ လှူဒါန်းနိုင် တာရှိတယ်။ အခုလည်း ဒီစီမံကိန်းရဲ့အောက်မှာ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုတဲ့၊ ပြန်လည် လက်ခံရေးနဲ့ လူသားခင်းစာနာထောက်ထား မှုဆိုတဲ့ ပြန်လည်လက်ခံတဲ့အပိုင်းမှာ အ ဆောက်အအုံတွေ အများကြီးလိုတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းမှာ ပြန် လာတဲ့လူတွေ တစ်ညသို့မဟုတ် နှစ်ည Respection Side မှာ နေရတာရှိတယ်။ နောက်တစ်ခါ အဲဒီဟာတွေအတွက်ကို ဝန်ထမ်းတွေ အများကြီး ရာနဲ့ချီပြီး သုံးရတာရှိတယ်။ သုံး ရတဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းတွေနေဖို့ နေတဲ့နေရာ တွေလည်းရှိတယ်။ ဒီနေရာကြီးမှာ အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ မြန်မြန်လည်း ဆောက်လို့ပြီးမယ်၊ အဆင်သင့်လည်း ဖြစ်မယ်၊ အခုလို တရုတ်နိုင်ငံက ယာယီနေအိမ်ကို လှူဒါန်း တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အတွက် လွယ်ကူသွားတာပေါ့။ အဲဒီအတွက် လွယ်ကူတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်။ အင်မတန်လည်း အသုံးဝင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန် တော့်အနေနဲ့ အလွန်ပဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံပီသစွာ ကူညီပေးတဲ့ တရုတ် နိုင်ငံကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြော ချင်ပါတယ်။
မေး- ဝန်ကြီးအနေနဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ရခိုင် ဒေသမှာ ဘယ်လို လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေ သေးတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကတော့ ခုနကပြောသလို မီးလောင်သွားတဲ့ အဆောက် အအုံတွေရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက မီးမလောင် ဘဲကျန်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မီးမလောင်ဘဲ ကျန်နေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေက အဲဒီနေရာတွေမှာ ရှိနေကြတယ်။ သူတို့ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်က အရေးကြီးတယ်။ သွားရေးလာရေး အဆင် ပြေဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုံမှန်လုပ်နေကျ အလုပ်အကိုင် တွေ ပျက်ယွင်းသွားတာတွေရှိတယ်။ သွား ရေးလာရေး ခက်သွားတာတွေရှိတယ်။ ညမထွက်ရအမိန့်ဆိုတာ နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ထုတ်ပြန်ရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ အဲဒီဒေသမှာရှိတဲ့ လူတွေ အတွက် အခက်အခဲ အများကြီးရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းရှိသလို မူဆလင် ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ရှိတယ်။ နှစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းစလုံးမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲ တွေကို ကျော်လွှားအောင်လုပ်ရမယ်။ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားအောင် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ နံပါတ်တစ်က လုံခြုံရေးလုပ်ရမယ်။ သွားလာရေးမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမှာ ရှိတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေ ပြန်ဖန်တီးပေး ဖို့လုပ်ရမယ်။ အိမ်အဆောက်အအုံတွေ ပြန် ဆောက်ပေးဖို့ လုပ်ရမယ်။
ဒီဟာတွေကိုလုပ် ပေးဖို့ဆိုပြီး UEHRD ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းကြီးဆိုတာ ပေါ်လာတာ။ ခုနကပြောသလို ဘာတွေ အခက်အခဲရှိသလဲဆိုရင် ဒါ တွေပါပဲ။ ခုနကပြောတဲ့ ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်လုံး ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် စီမံကိန်းအောက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားများအား လုံးရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအင်အား၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အင်အား၊ အဲဒီလို တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုအင်အား၊ နောက်တစ်ခါ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဖောင် ဒေးရှင်းတွေရဲ့ ပါဝင်မှုက ဒီခေါင်းစဉ်သုံးခု အောက်မှာပဲ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနေကြ တာရှိတယ်။ အဲဒီလို အင်အားတွေ အများ ကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအင်အားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ပြန်လည်လက်ခံ ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ နှစ် နိုင်ငံသဘောတူညီချက်က ချုပ်ဆိုထားပြီးသား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့။ အဲဒီစာချုပ်အရဆိုရင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး နှစ်လအတွင်း စတင်လက်ခံ ဖို့ စီစဉ်ရမယ်ဆိုတာ ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်ထိုးတာက ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်ဟာ စတင်လက်ခံနိုင်တဲ့ ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ခံတဲ့နေရာ မှာ စာချုပ်အရ မိမိသဘောအရ ဝင်ရောက် ခြင်းကို လက်ခံတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ တော့ မိမိဆန္ဒအရလာပါလို့ အတင်းခေါ်လို့ မရသလို တစ်ဖက်ကလည်း သွားရမယ် လို့ အတင်းတိုက်တွန်းလို့ မရပါဘူး။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက် ပြန်လာချင်တဲ့ သူတိုင်းကို ဦးရေကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ အဲဒီပြန်လာတဲ့ လူတွေကို စစ်ဆေး စရာတော့ ရှိပါတယ်။
ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီဒေသမှာ နေသွားတဲ့ သူတွေဖြစ်တာ သေချာကြောင်း စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ မူလကထွက်သွားတဲ့ သူတွေ ပြန်ဝင်လာတာကို စနစ်တကျ လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာကိုလည်း လုံခြုံရေးအရ စစ် ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာ ပြန်လည်လက်ခံဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်မယ်။ ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့ နေ ရာမှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ အစီအစဉ် က လာချင်တဲ့သူတွေက ပုံစံတွေ ဖြည့်စွက် ရပါတယ်။ ပုံစံတွေဖြည့်စွက်တာကို လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးက ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အဲဒီ ပုံစံတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ပို့ပြီးသား ပုံစံတွေကို ဖြည့်စွက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီဘက်ကို ပြန်ပို့မယ့်လူတော့ မရောက်သေး ဘူး။ ပုံစံတွေ အရင်ရောက်လာမယ်။ အဲဒီ ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ အရင် ဒီလူတွေသည် ဒီမှာ တကယ်နေခဲ့တဲ့လူတွေ လားဆိုတာ ဒီမှာရှိတဲ့စာရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးရပါမယ်။ စစ်ဆေးပြီးမှ ဟုတ်ပြီ။ လွှတ် လို့ရပါပြီဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့က ဒီစာရွက်တွေ ပြန်ပို့မယ်။ ပြီးရင် ပြန်လည်လက်ခံတဲ့ကိစ္စ ကို ဆောင်ရွက်မယ်။ မိမိဆန္ဒအရဖြစ်တဲ့အ တွက် လုံခြုံရေး အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်က ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ထားမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီး လက်ခံပြီးပြီဆိုရင် လက်ခံရေးစခန်းမှာ တစ်ညသို့မဟုတ် နှစ်ညထက် ပိုမကြာပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ကြားစခန်း ကိုရောက်ပါမယ်။ တချို့က အဲဒီကိုတိုက်ရိုက် သွားသလို၊ တချို့ကလည်း ကိုယ်နေခဲ့တဲ့နေ ရာတွေမှာ အိမ်မရှိရင် အိမ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ ကျွန်တော်တို့ စနေပါပြီ။ ဒီကပေးတဲ့ ယာယီနေအိမ်တွေမှာ သူတို့နေပြီးတော့ သူတို့ အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်လို့လည်း ရတယ်။ လုပ်ချင်ရင်ပေါ့။ မလုပ် ချင်လည်းရတယ်။ လုပ်ရင်ပိုက်ဆံ နေ့စားခရမယ်။ ပြီးရင် တက်နေရုံပဲ။
မေး- ပြန်လည်လက်ခံတဲ့လူတွေကို ရခိုင် ဒေသမှာပဲ နေချထားပေးမယ်လို့ သိရသ လို၊ ပြည်မထဲကိုလည်း ပို့မယ်လို့ ကြားသိနေ ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးသိသ လောက် ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- သဘောတူညီချက်အရ သူတို့နေခဲ့တဲ့ နေရာကိုတော့ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးပေါ့။ သို့သော် ရွာစီမံကိန်းလုပ်တယ်။ ဘာလို့ လုပ် ရလဲဆိုရင် သူတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင် အရင်တုန်းက ကျန်းမာရေးဌာန မရှိဘူးဆိုရင် ကျန်းမာရေးဌာနထည့်မယ်။ လုံခြုံရေးစခန်းမရှိရင် လုံခြုံရေးစခန်း ထည့်ပေးထားမယ်။ လမ်းက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုရင် ကျယ်ကျယ်ချဲ့ပေးထားတယ်။ ဒီပုံစံ တွေ ပြောင်းတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီလို ပုံစံပြောင်းတာ သူတို့ကို သတ်သတ်ခွဲထုတ်တာမဟုတ် ဘူးနော်။ အဓိကက အလုပ်အကိုင်ကို အဓိကထားတယ်။ နဂိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် နယ်မြေ၊ တောတောင်နဲ့ မဝေးသွားဖို့ အရေး ကြီးတယ်။ အပြင်မှာ ကြားနေရတဲ့ ကောလာ ဟလကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကိုဖီအာနန် ရီကော်မန်ဒေးရှင်းဆိုတာရှိတယ်။ ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်ကတင်တဲ့ အစီအရင်ခံစာကို အကောင်အထည် ဖော် နေတဲ့အလုပ်က နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ၁၉၈၂ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူတို့အတွက် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံသားအသိအမှတ်ပြု အစီ အစဉ်ထဲကို ဝင်လိုက်ရင် အင်န်ဗွီစီကတ်တစ်ခုရမယ်။ အကယ်၍ သူတို့မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု တို့၊ ပြုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုတို့ စသဖြင့် ခွဲခြားနိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင် အင်န်ဗွီစီကတ်ကို ကိုင် ဆောင်လို့ရတယ်။ ဒီကတ်ကို ကိုင်ဆောင်တာ နိုင်ငံခြားသားလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာ တရားဝင်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုတာ။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့အဆင့်ကတော့ မခွဲရသေးဘူးပေါ့။ ပြုနိုင်ငံသားလား၊ ဧည့်နိုင်ငံသားလား ဆိုတာပေါ့။ ဒါလေးကိုင်ထားရင် လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိမယ်။ သို့သော် ပြည်နယ်၊ တိုင်းတွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ စည်း မျဉ်းတွေတော့ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကိုတော့ လိုက်နာရမယ်။ အဲဒါကြောင့် စောစောကပြော သလိုတွေ ပြောတာလားလို့တော့ မသိဘူး ပေါ့။ အရင်ကထက်စာရင်တော့ သူတို့အတွက် ပိုကောင်းလာမယ်။ ပညာရေးနဲ့ကျန်း မာရေးအတွက် ပိုပြီးလက်လှမ်းမီမယ်။
မေး- ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်း ဘယ်လို ပုံစံမျိုး လက်လှမ်းမီမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။
ဖြေ- သူတို့ နဂိုအခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့အ ခြေအနေတွေက ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ အခြားနေ ရာကိုသွားပြီးတော့ စာသင်ဖို့အတွက် ခက်ခဲ တယ်ပေါ့နော်။ ဥပမာ- အလယ်တန်းအောင်ရင် အထက်တန်းသင်ဖို့ ခက်ခဲတယ်။ အထက်တန်းအောင်ရင် တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ ခက် ခဲတယ်ပေါ့။ ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုရင် ခုနကပြောတဲ့ သွားလာခွင့်အပေါ် မူတည်တယ်။ သွားလာခွင့်က ဒီနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ အင်န် ဗွီစီကတ်သာကိုင်ဆောင်ထားရင် ဒီကိစ္စက ပြေလည်သွားမယ်။ ပညာရေးအတွက်ပါ ပြေလည်သွားမယ်။ တက္ကသိုလ်၊ အထက်တန်းသွားတက်လို့ရမယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း အဲဒီလိုပဲ ဒီဆေးရုံတက်လို့မရဘူး၊ ဟိုဆေးရုံတက်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ တချို့အကန့်အသတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ လျှော့ပေးရမယ်။ အကန့်အသတ်တွေကိုလုံခြုံစွာနဲ့ ဥပဒေအရပိုပြီး ဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရင် ပိုလွတ်လပ်စွာသွားလို့ရမယ်။ အဲဒီကျတော့မှ ပညာရေး ရော၊ ကျန်းမာရေးပါ ပိုကောင်းသွားမယ်။
မေး- ဒါဆိုရင် သူတို့ကိုင်ဆောင်တဲ့ ကတ်အပေါ်မှာပဲ မူတည်သွားတာပေါ့။
ဖြေ- ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလိုယူဆတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိလာမယ်။ လူတစ်ယောက်က ရောက်လာတယ်။ သူ့မှာဘာရှိလဲမေးရင် အထောက်အထား ဘာမှမရှိတဲ့ လူတစ် ယောက်ကို ဘယ်လိုလုပ် လုံခြုံရေးသမားက ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုလို့ရမလဲ။ သူတို့သည် ဒီ နိုင်ငံမှာ နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ ရှိရမှာပေါ့။ အဲဒီကတ်ပဲ။
အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ။
မူးယစ်ဆေးဝါး ကျော်ကြားသတင်းအရ သုသာန်အနီး ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာ လူ ၇ဝ တွေ့ရှိပြီး မူးယစ်ဆေးဝ??
မူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းကြီးများ နှိမ်နင်းရန် အမေရိကန်-မက္ကဆီကို ပူးတွဲအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း